Khabar Kantipur » ससुराली आएका लोकबहादुरको उपचारै नपाएर मृत्यु, ……!
ससुराली आएका लोकबहादुरको उपचारै नपाएर मृत्यु, ……!
काठमाडौ । धनुषामा एक युवाको उपचार नै नपाएर मत्यु भएको छ । ससुराली आएका उनी अस्वस्थ्य भएपछि केही दिन घरमै राखेर उपचार गरिएको थियो । तर स्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि उनलाई अस्पताल लैजाँदा कुनै पनि अस्पतालले भर्ना लिएनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपचारको अभावमा कुनै पनि बिरामीले मर्नु नपर्ने दावी गरेको २४ घण्टा नबित्दै एक युवाले उपचार नपाएरै मृत्यु भोग्नु परेको छ । धनुषाको मिथिला नगरपालिका घर भई ससुराली बटेश्वरमा करिब एक सातादेखि बस्दै आएका ४० वर्षीय लोकबहादुर परियारले उपचार नै पाएनन् ।
तर एम्बुलेन्स चालकले जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पताल लगे त्यहाँ वेड छैन भनेर फर्काइयो, उनले अन्य निजी अस्पतालमा पनि लगे तर कसैले पनि उनलाई भर्ना लिएनन् ।
बाध्य भएर उनलाई बटेश्वर बजारस्थित आरपी मेडिकल हलमै फर्काएर ल्याए । उनको मेडिकल हल अगाडी नै निधन भयो । एम्बुलेन्स चालक रामबाबु महतोका अनुसार अस्पतालहरुले पैसा डिपोजिट गर्न भनेको तर बिरामीका आफन्तले पैसा डिपोजिट गर्न नसक्दा अस्पतालहरुले बिरामीको भर्ना गर्न मानेनन् ।